L3 + Chinja Vagadziri & Vatengesi - China L3 + Chinja Fekitori
CS6200-52X-P-EI Dual Stack 10G 48 Ports PoE Ethernet Chinja
CS6200-52X-P-EI 10G inokwenenzvera nzira Poe switch ine advanced hardware uye software dhizaini dhizaini. CS6200-52X-P-EI inopa kuwanikwa kwakawanda, kusagadzikana, chengetedzo, kushanda nesimba, nekureruka kwekushanda pamwe nezvinhu zvakapfuma senge VSF, IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt uye magetsi anowedzera simba. Iyo yakanaka kune yakakwira-kuwanda kuunganidzwa kana musimboti rukoko mumakampasi network kana SMB network. Makiyi Akakosha uye Akakosha 60W PoE Yekutanga 8 PoE madoko anotsigira IEEE 802.3bt (60w). Vanogona kuva ...
CS6200-28X-HI-24F Yakakwira Performance 10G Yakazara Fiber Ethernet Chinja
CS6200-28X-HI-24F chinotevera-chizvarwa 10G chinokwanisika kuendesa switch ine advanced hardware uye software dhizaini dhizaini, yakavakirwa-mukati modular 1 + 1 redundant magetsi emagetsi. CS6200-28X-HI-24F inopa kuwanikwa kwakanyanya, kusagadzikana, chengetedzo, kugona kwesimba, uye kureruka kwekushanda pamwe nezvinhu zvine simba senge VSF (Virtual switch Framework), magetsi emagetsi akasarudzika uye OpenFlow. Iyo yakanaka kune yakakwira-kuwanda kuwanda kana musimboti rukoko rwecampus network, ISP, uye bhizinesi. Makiyi Akakosha uye Kukosha ...
CS6200-8G24S2Q-EI Dual Stack 40G Ethernet Kutenderera Fibhi Chinja
DCN CS6200-8G24S2Q-EI ndeye L3 inokwenenzverwa switching switch ine 40GE fiber uplink zviteshi. CS6200-8G24S2Q-EI ine advanced hardware uye software dhizaini dhizaini, yakavakirwa-mukati maviri anowedzera simba magetsi. CS6200 inopa yakakwira kuwanikwa, kusagadzikana, chengetedzo, simba simba, uye nyore kwekushanda pamwe nehunyanzvi maficha senge VSF (Virtual Shandura Furemu-basa) uye 3 yakagadziriswa Auto-yakagadziriswa fan mayuniti. Iyo inokodzera kune yakakwira-density density ag-gregation mune Enterprise network kana Campus network. Zve SMB, CS62 ...